» Dhageyso:Kursiga Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo noqday kan ugu gor-gortanka badan ee Ololaha DoorashadaBadweyntimes.com
Dhageyso:Kursiga Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo noqday kan ugu gor-gortanka badan ee Ololaha Doorashada
Feb 8, 2017 - 1 Jawaab
Xanta ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayaa sheegeysa in xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho uu noqday kan ugu weyn ee gor-gortanka badan lagu galayo, iyadoo hadba Musharaxiinta qaar lagala hadlay xilkaas iyo kuwa kale oo Wasiiro ah.
Wararka ayaa sheegaya in Xildhibaanada Beesha Muddullood ay ku gor-gortamayaan xilka Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho.
HALKAAN KADHAGEYSO XOGTA
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo ka mid ah Ololaha Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la sheegayaa inuu cadaadis kala kulmayo Xildhibaanada Beelaha Abgaal oo ku gor-gortamaya xilka uu fadhiyo.
Duqa Muqdisho ayaa ku guuldareystay inuu soo saaro Musharaxiin uu taageerayay doorashadii xubnaha Aqalka Hoose ee Jowhar ka dhacday.
« Warbixinta Ka HoreysayDaawo:Qaabka doorashada saake udhaceyso iyo gudoomiyaha doorashada soo saaray digniino cusub
Warbixinta Xigto »Dhageyso:Shaqsi u eg Gabre oo kamid noqde xildhibaanada iyo shacabka oo sheegay in gabre xildhibaan noqde?
HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Hal Jawaab : Dhageyso:Kursiga Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo noqday kan ugu gor-gortanka badan ee Ololaha Doorashada
ahmed says:	February 8, 2017 at 5:52 am	waxan soodhaweynaa hab wanaaga shaqada aad qabataan